Mampidi-doza an'i Nazca | ny tsy fisian'ny fahatsiarovan-tena Vaovao momba ny dia
Mampidi-doza an'i Nazca ny tsy fisian'ny fahatsiarovan-tena
Any Peroa, eo anelanelan'ny tanànan'ny Nazca sy Palpa, misy ny zava-miafina arkeolojika malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ao amin'ity efitra ity dia misy andian-geoglyph goavambe tsy hita maso amin'ny haavo iray ihany, izay mamorona tarehimarika biby, olombelona ary geometrika. Ny kolontsaina Nazca no namorona azy ireo teo anelanelan'ny taona 200 talohan'i JK ka hatramin'ny taona 600 taorian'i JK ary hatramin'ny nanombohan'ny mpikaroka ny arkeology azy ireo tamin'ny taona XNUMX dia nisy teôria am-polony maro momba ny fiaviany sy ny dikany na dia mistery aza izy ireo.
Harena nasionaly ho an'i Peroa ny tsipika Nazca ary miambina azy fatratra izy ireo. Na izany aza, i Nazca dia tsy azo antoka amin'ireo loza mitatao manambana azy. Izay tongotra aman-tongotra any amin'ilay faritra, noho ny fitaovana sy ny toetr'andro, dia mijanona mandritra ny an'arivony taona maro ary tsy azo ovaina izay tena simba vokarina.
Mampalahelo fa ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tena momba ny fahatsapana ny toerana tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nanjary andiana hetsika izay nandratra mafy an'i Nazca.
1 Ny simba vokarin'ny Nazca
2 Ny fisainana momba an'i Nazca, inona no niandohany?
3 Maneho inona ireo Nazca Lines?
Ny simba vokarin'ny Nazca
Ny vaovao sy manimba indrindra azy ireo dia niseho tamin'ny volana janoary lasa teo, raha nisy mpamily iray avy amin'ny orinasam-pitaterana niditra tao amin'ny Nazca Pampas na dia teo aza ireo fambara nampitandrina fa tsy maintsy niteraka fahavoazana mahatsiravina. eo amin'ny toerana arkeolojika amin'ny faritra sahabo ho 100 metatra. Vokatr'izany, dian-tongotra sisa no tavela tamin'ny tany ka nisy fiantraikany tamin'ny isa telo an'arivony taona voasintona tao anaty fasika.
Raha ny fantatra dia tsy nahalala ny toetran'ny fiaroana ny tovolahy ary niditra tao amin'ny Nazca Pampas satria nanana olana tamin'ny kodiarana ny fiarany. Na izany aza, nitatitra ny minisiteran'ny kolotsaina peroviana fa hanameloka an-tsokosoko ny mpamily amin'ny fanambarana iray.
Fa ny Nazca Lines kosa dia efa simba talohan'izay. Tamin'ny 2014, nandritra ny Fihaonambe miketrika ny Firenena Mikambana natao tany Lima, dia niditra tao amin'ilay faritra ireo mpikatroka mafàna fo avy amin'ny fikambanana Greenpeace ary, tao amin'ny faritra misy ilay geoglyph hummingbird, nametraka litera goavambe maro izy ireo miaraka amin'ny hafatra hoe "Fotoana tokony hanaovana fanovana! Azo havaozina ny ho avy. Greenpeace. " ny lanitra ihany no hita. Taorian'ny tabataba, Greenpeace dia nanandrana nifona noho ny fahasimban'ny tranokala, izay efa tsy azo namboarina intsony.
Herintaona taty aoriana, tamin'ny septambra 2015, nisy lohahevitra niditra tao amin'ilay toerana ary nanoratra ny anarany tao amin'ny iray amin'ireo geoglyphs. Ilay lehilahy dia nosamborin'ireo mpiambina tompon'andraikitra amin'ny fiarovana an'i Nazca ary natolotra ny fampanoavana.
Ny fisainana momba an'i Nazca, inona no niandohany?
Tamin'ny voalohany, ireo arkeology dia nihevitra fa ny tsipika Nazca dia lalana tsotra fotsiny, fa rehefa nandeha ny fotoana dia nahazo tanjaka hafa ny teoria hafa izay mitazona fa "toeram-pivavahana" dia noforonina mba hahafaly ny andriamanitra avo.
Androany dia fantatsika fa ny mponina Nazca dia namorona ny geoglyphs tamin'ny fanesorana ireo vato avy eny ambonin'ny tany mba hahitana ny vato fotsy eo ambaniny. Ho fanampin'izany, misaotra ireo mpikaroka marobe avy amin'ny Oniversite Yamagata any Japon, fantatray fa misy karazana tarehimarika efatra samihafa izay miara-mivondrona amin'ny làlana samy hafa miaraka amin'ny toerana itodiana azy: ny tanànan'i Cahuachi talohan'ny Inca. Andro iray ihany piramida sisa tavela fa nandritra ny androny dia ivon-toerana fivahinianana voalohany sy renivohitry ny kolontsaina Nazca izy.
Araka ny voalazan'ny arkeology japoney, ny tarehimarika Nazca dia natsangan'ny kolontsaina roa farafahakeliny misy teknika sy tandindona samy hafa, izay hita ao amin'ireo geoglyphs izay manara-maso ny lalana avy any amin'ny faritra niaviany hatrany amin'ny tanànan'i Cahuachi.
Hitan'izy ireo koa fa niova ny sary tamin'ny faritra akaiky ny Lohasahan'i Nazca sy ny lalana mankany Cahuachi. Ao amin'io faritra io dia misy fomba hafa amin'ny sary, miavaka indrindra amin'ny fanehoana zavaboary sy loha mihoatra ny natiora toy ny amboara. Vondrona geoglyph fahatelo izay natsangan'ny vondrona roa tonta dia hita eo amin'ny lemaka Nazca, ilay elanelam-potoana eo anelanelan'ny kolontsaina roa.
Raha ny filazan'ny arkeology Japoney dia niova ny fampiasana ny tarehimarika Nazca rehefa nandeha ny fotoana. Tamin'ny voalohany dia noforonina noho ny antony ara-pomba fotsiny izy ireo, saingy taty aoriana dia napetraka teny amin'ny làlana izay mankany Cahuachi izy ireo. Mifanohitra amin'ny eritreritry ny sasany, toa tsy nampiasaina hanamarihana ny lalan'ny fivahinianana masina ireo tarehimarika ireo, satria tokony efa nasiana marika tsara izy io, fa kosa hamelona ny fomba fijery, ary manome azy io ho fombafomba.
Na izany aza, maro ny olona nanandrana nanome valiny ny dikan'ny tsipika Nazca ary misy teôria maro momba ny fiaviany. Ilay matematika María Reiche dia nanam-pahefana tamin'i Paul Kosok tamin'ny alàlan'ny fikarohana ilay fikajiana fa misy dikany astronomika ireo sary ireo. Ny mpitsangatsangana Reindel sy Isla dia namoaka tranokala mihoatra ny 650 ary nahavita namantatra ny tantaran'ny kolontsaina nahatonga ireo sary ireo. Zava-dehibe tokoa ny famatsian-drano tany amin'ny faritra satria tany efitra io. Ireo sary dia namorona tontolon'ny fombafomba izay tsy maintsy ho fampiroboroboana ny fiantsoana ireo andriamanitra rano. Nahita tady sy tsatoka nahitan'ireo olona ireo ny sary ny arkeology.
Maneho inona ireo Nazca Lines?
Ny sary Nazca dia geometrika sy an'ohatra. Ao anatin'ny vondrona ara-panoharana no ahitantsika biby: vorona, gidro, hala, alika, iguana, androngo ary bibilava.
Saika ny sary rehetra dia natao teny ambonin 'ny fisaka ary misy vitsivitsy ihany eo an-tampon' ny havoana. Saika ny tarehimarika rehetra apetraka ao amin'izy ireo dia maneho tarehin'olombelona. Ny sasany satro-boninahitry ny tsipika mitsivalana telo na efatra izay mety maneho ny volom-borona amin'ny fehiloha fanaovana fombafomba (ny momia Peroviana sasany dia nanao fehiloha volamena sy volom-borona).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Mampidi-doza an'i Nazca ny tsy fisian'ny fahatsiarovan-tena
Toerana tena ilaina hitsidihana any Italia